कस्तो व्यक्तिमा हुन्छ ‘बलात्कारी मानसिकता’?
-मनोविद् डा विवेक सुवेदि
काठमाडौं- लकडाउन भएसँगै नेपालमा बलत्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । नेपालमा कडा कानून भएपनि बलात्कारका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बृद्धि भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ६ महिना (चैत २०७६ देखि भदौ) २०७७ को तथ्यांक अनुसार १ हजार २२१ बलत्कारको घटना भएको छ ।
बलत्कार मानसिक समस्याका कारण पनि हुन सक्छ भन्ने बारे थोरे व्यक्तिहरु मात्र जानकार छन् । बिशेषज्ञहरुका अनुसार बलत्कार मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या हो । मानसिक समस्या भएका व्यक्तिमा पनि सेक्सुअल एग्रेशन हुने गर्छ । मानसिक समस्या जस्तै मेनिया अर्थात मुड डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरु छिट्टै उत्तेजनामा आउने भएकाले बलत्कारको प्रयास गर्ने गर्छन् । मेनिया भएमा विपरित लिगं बिच आकर्षक धेरै हुने गर्छ । मेनिया महिला र पुरुष दुबैमा हुन सक्छ ।
त्यस्तै इष्र्या, बदला भाव, आक्रोश यौन सन्तुष्ट्रि र मन नपारउने व्यक्तिसँग झगडा गर्ने वा बलत्कारको प्रयास गर्ने बढि सम्भाबना हुन्छ । साथै अल्कोहल सेवन गर्ने व्यक्तिले पनि बलत्कारको प्रयास गर्ने गर्छन् ।
हाम्रो समाजमा पुरुषले महिलालाई बलत्कार गरेका घटनाहरु धेरै छन् तर महिलाले पुरुषलाई पनि बलत्कार गर्न सक्छन् । ८० देखि ९० प्रतिशत बलत्कारका घटना पुरुषले महिलालाई गर्ने गर्छन् । भने १० प्रतिशत बलत्कारका घटना महिलाले पुरुषलाई गरेको पाइन्छ ।
सेक्सुअल डिसअर्डर भएका व्यक्तिमा अत्याधिक यौन चाहाना हुन्छ । यौन सन्तुष्टिका लागि पनि बलत्कारकाको प्रयास गर्न सक्छन् ।
३० बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुमा यो समस्या धेरै हुन्छ । विश्वमा हरेक ७ सेकेण्डमा कतैनकतै एक जनामा बलत्कार भइरहेको हुन्छ । अल्कोहल सेवन गर्ने अन्य ड्रग्सहरुको सेवन गर्ने व्यक्तिले पनि बलत्कारको प्रयास गर्न सक् छन् । अल्कोहलको सेवनले उत्तेजना बढाउँछ । पुरुषमा टेष्टेटोरन हर्मोन बढि भएमा र महिलामा स्ट्रोजन हर्मोन बढि भएमा पनि बलत्कारको घटना हुन सक्छन् ।
महिला पुनस्थापना केन्द्र ९ओरेक० मा असोजसम्म अभिलेखिकरण भएका ३६७ बलात्कारका घटना भएका छन । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत प्रभावित २ वर्षदेखि १८ वर्षमुनिका बालिकाहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ । बलात्कारका घटनामध्ये झण्डै ९० प्रतिशत घटना परिचित व्यक्तिबाट घर, छिमेक तथा आफ्नै समुदायमा भएका छन् । ओरकको यो तथ्यांक अनुसार, महिला तथा किशोरी घर तथा समुदाय काहिँ पनि सुरक्षित नभएको देखिन्छ । माथिको तंथ्यांक अनुसार कम उमेरका विपन्न परिवारका बालिकाहरु अझै बढि बलत्कारका जोखिममा रहेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरी मुख्यालयले दिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष बलात्कारका २,१४४ घटनाहरू दर्ता भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बलात्कारका २६० घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन् जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हो।
यस्ता घटना पछि पिडित महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने बिशेषज्ञ बताउँछन् । बलाकृत महिलामा फ्लास ब्याक अर्थात आफुसँग भएको घटना याद आइरहने, बेला बेला होश गुमाउको जस्तो हुने, निन्द्रा गडबढि हुने खान मन नलाग्ने लगायतका समस्याहरु देखिने गर्दछ । ४० देखि ९० प्रतिशत पिडित महिलाहरुमा यस्तो समस्या आउन सक्छ ।
त्यस्तै मुड डिसअर्डर, एन्जाइटि हुने, दुरव्यसनमा लाग्ने, सेक्सुअल डिसअर्डर अर्थात यौन चाहाना नै नहुने जस्ता समस्या देखिने गर्छन् । पिडितलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउनका लागी सुरुमा उनिहरुको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै उनिहरुलाई सुरक्षित पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । बलाकृतहरु धेरै जसोले आत्महत्याको प्रयास गर्छन् । भने कोहिले बलात्कारलिाई हानी पुर्याउन सक्छन् ।
पिडितलाई सुरक्षित राख्न परिवारसँग हिस्टि लिएर बुझेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उनिहरुलाई सुरक्षित राखेर चोटपटक लागेको छ छैन हेरेर उपचार गर्नुपर्छ साथै उनिहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरलाई न्युनिकरण गर्न उपचारको थालनी गर्नुपर्छ । पिडितहरु कोहि शंका गर्ने, एक्लै बस्न रुचाउने जस्ता व्यवहार देखिएमा तुरुन्त उपचारको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
उनिहरुको मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागी साइको थेरापी, कगनेटिभ बिहेबिएर थेरापी दिइन्छ । कगनेटिभ बिहेबिएर थेरापीमा उनिहरुको दिमागमा कस्तो विचार आइरहेको छ त्यसलाई ठिक गर्ने प्रयास गरिनछ । यस्तो समस्या भएका व्यक्तिलाई समुहमा सम्झाउने प्रयास गरिन्छ । त्यसबाहेक इन्डिभिनुएल र फ्यामिली थेरापी दिइने गरिन्छ । त्यसबाहेक कोहि धेरै डराएका छन्, आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् भने उनिहरुलाई औषधि पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता समस्याबाट बाहिर निस्कका लागी परिवारको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । पिडितले आत्मविश्वास गुमाइसकेका हुन्छन् । परिवारले पिडितलाई आफु हर कदममा साथ भएको महशुस गराएमा उसको मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा सहयोग पुग्छ ।
यस्ता रोग जन्मजातबाट पनि भएको हुन सक्छ । त्यसैले यी सबै रोगको उपचार सम्भव छ । कतिपय समस्याका उपचार अलि जटिल पनि हुन्छ । एक दुई वटा मात्र जन्मजात समस्या हुन्छन् । जसको उपचार निकै जटिल हुन्छ । तर, उपचार नै हुँदैन भन्ने चाही होइन । यस्ता रोगको उपचार सम्भव छ ।
यस्तो समस्याबारे परिवारको आफ्नै सदस्यबारे पनि सचेत हुन जरुरी हुन्छ । कसैसँग व्यवहार गर्दा र सडकमा हिड्दा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसले गर्ने गतिविधि सामान्य हो वा दुव्र्यवहार हो भनी बुझेर मात्र प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ । यस्ता मानसिक समस्या भएका मानिस नेपालमा मात्र नभएर संसारभर नै हुने गर्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले आफु नै सुरक्षित रहनुपर्छ ।
कसरी गर्ने यौन शोषण र यौन बलात्कार नियन्त्रण ?
बलत्कारका घटना रोकथामका लागी विभिन्न माध्यमबाट सचेतना फैलाउनुपर्ने हुन्छ । स्कुल कलेजमा महिला पुरुष राखेर यौन शिक्षा दिनुपर्छ । कडा कानुन बनाएर, यौन अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै नैतिक ज्ञान दिने, व्यक्तित्व सुधारका कार्यक्रमबाट बलत्कारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।